MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardMPT Club - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT Club မှာ MPT သုံးစွဲသူတိုင်း ဆုလက်ဆောင်များရရှိနိုင်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ MPT Club အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ထားသော MPTဖုန်းနံပါတ်ကိုငွေဖြည့်တိုင်း၊ MPT၏ မိတ်ဖက်(partner) ဆိုင်များတွင် ဈေးဝယ်တိုင်း MPT Point များကို ထပ်ဆောင်းလက်ဆောင်အဖြစ် ရရှိနိုင်မှာပါ။
ရရှိထားသော MPT Pointများဖြင့် အထူးစီစဉ်ထားသော MPT ဝန်ဆောင်မှုများ၊ MPT မိတ်ဖက် (partner) ဆိုင်များမှ ဈေးဝယ်ကူပွန်များကို လဲလှယ်ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများအနက်မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်မျိုးကိုသုံး၍ တစ်ကြိမ်လျှောက်ထားရုံဖြင့် MPT Point အစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်နိုင်ပါသည်။
1. USSD ကို အသုံးပြုခြင်းနည်းလမ်း – *345# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် MPT Club အစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်နိုင်ပါသည်။
2. SMS ကို အသုံးပြုခြင်းနည်းလမ်း – 345သို့ REG M/F DateofBirth (ဥပမာ- REG F 09/07/1991) ဟု စာတို (SMS) ပေးပို့ခြင်းဖြင့် MPT Club အစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်နိုင်ပါသည်။
3. Webpage ကို အသုံးပြုခြင်းနည်းလမ်း -https://mptpoint.mpt.com.mm:8445/rp/
MPT Club ကိုအခုပဲရယူပါ။
USSD *345# သို့ 345 သို့ sms ပေးပို့ပါ။
MPT ကနေ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ MPT Point တွေ ရရှိနိုင်မှာပါလဲ
သုံးစွဲသူဧ။် ဖုန်းငွေဖြည့်သည့် ပမာဏအပေါ်မူတည်ပြီး MPT Point များပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီးပါက ၃၀ မိနစ်အတွင်း MPT Point ကိုသုံးစွဲသူဧ။် အကောင့်အတွင်းဖြည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်ကာ စာတိုပေးပို့၍ အသိပေးပါမည်။ စစ်ဆေး
ကြည့်လိုပါက “345” သို့ “BAL”ဟုစာတိုပေးပို့ပါ။
MPT၏ မိတ်ဖက် (partner) ဆိုင်များတွင် အသုံးပြုသော (စျေးဝယ်ယူသော) ငွေပမာဏအလိုက် MPT Point များကို ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်းရရှိထားသော MPT Point များကိုသုံးပြီး အောက်ဖော်ပြပါများမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ MPT ၀န်ဆောင်မှုများကို လဲလှယ် ရယူနိုင်ပါသည်။၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုစီ၏ သက်တမ်းမှာ လဲလှယ်ရယူပြီးချိန်မှစ၍ ရက်၃၀အထိဖြစ်သည်။